अल्कोहल जस्ले कसरी उजाड बनाइरहेछ म जस्ता ‘बाउ’हरुको घर परिवार ? – YesKathmandu.com
हो, म पनि त्यस्तै एक अल्कोहलिष्ट हुँ । लामो समयको रिह्याव सेन्टरको बसाइ पछाडि म सुध्रिएको छु/ बदलिएको छु । रक्सी विना बाच्न सक्ने भएको छु । तर मेरो खुशी,प्रगति हेर्ने यतिखेर बुवा/आमा,श्रीमती,छोरी कोही छैनन मेरो साथमा । म नितान्त एक्लो,शून्य छु ।
पिता श्याम बहादुर बस्नेत महालेखा परिक्षकको कार्यलयको जागिरे । सवारी दुर्घटनामा परीे दश वर्ष अगाडि बित्नुभयो । आमाले संसार छाडेर जानुभएको बीस वर्ष बढी भयो । सुःख,दुःखमा साथ दिने जीवन संगिनी,एक छोरी थिइन । उनीहरु अहिले साथमा छैनन । साथमा हुँदा उनको महत्व बुझिन अहिले उनैलाई सम्झेर भावुक हुन्छु/पीडित बन्छु ।
सुरुमा मैले रक्सी खाए,पछि हुँदा हुँदै रक्सीले मलाई खान थाल्यो । साथीभाइहरुसँग रमाइलो रमाइलोमा खाइयो । पछि वानी पर्यो । तिनताक रेडियोमा बोलिन्थ्यो । त्यही घमण्ड थियो आफूलाई । पछाडि त यस्तो दिन पनि आयो रक्सी बानी नै भयो । रक्सी नखाई रेडियोमा बोल्न मात्र होइन साथीसंगीहरु सँग बोल्न पनि नसक्ने भए । स्कूल पढ्दा यस्को लत थिएन । अरनीको वोडिङ स्कूल सातदोबाटोमा अध्ययन गरे । यही बीचमा बुवाहरुले महेन्द्र शान्ती माध्यमिक विद्यालय खोल्नुभयो । म सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न थाले । एसएलसी सोही विद्यालयबाट उत्र्तीण गरेको हुँ ।
स्कूल अध्ययन गर्दै गर्दा रक्सीसँग अपरिचित मेरो साइनो रक्सीसँग जोडिनुको किस्सा रमाइलो छ । बाबा हुनुहुन्थ्यो कर्मस डबल एमए वाला । उहाँको रुची थियो छोरालाई कर्मस नै पढाउने । तर,मेरो रुची चाहिँ इन्जिनियरिङमा । एसएलसी उत्र्तीण गरेपछाडि लुकी लुकी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएर फर्म भरे । नाम पनि निस्क्यो । तर बुवालाई यो कुरा मन परेन । बुवा र म बीचमा भएको यही लडाईका कारण म भागेर बीरगञ्ज गए । अल्लारे बुद्धि सात÷आठ दिन बीरगञ्ज बसेर काठमाडौं फर्किए । मीनभवनका क्याम्पस चिफ पिताजीका साथी । जे कुरा देखि डर थियो त्यही पुगेर ठोकिए अर्थात कर्मस बाट भागेकै कर्मस नै पढ्न थाले ।
त्यतिबेलासम्म हाँसिखुशी परिवार थियो । आफूलाई संसरकै भाग्यमानी सम्झन्थे । यही बीचमा एक वर्षको अफेयर पछाडि मगर्नीको छोरीलाई भगाए भनौं अर्थात प्रेम विवाह गरियो । अर्थात गृह मन्त्रालयमा कार्यरत जीवन थापाको छोरी कमला थापा मगरलाई भगाएर कमला बस्नेत बनाए । उनको आमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
शिक्षित परिावर हाम्रो प्रेममा पर्खाल बनेनन । बरु साथ सहयोग नै गरे । विवाह पछाडि कल्पना नर्सिङ पढ्न थालिन । ओम नर्सिङ इन्सिच्यूडमा आफैंले लगेर भर्ना गराए ।पेशाले रेडियोकर्मी थिए । एफएम रेडियोको यात्रा हिट्स एफएम हुँदै सुरु भएको । शिव परियार,प्रमोद खरेलहरुको सबै भन्दा पहिलो अन्र्तवार्ता सोह्र वर्ष अगाडि मैले नै रेडियोमा बजाए । तिनताक रेडियोमा आफ्नो स्वर बज्दा संसारकै नामी मान्छे ठानिन्थ्यो । जति कमाइन्थ्यो उति रक्सीमा उडाइन्थ्यो । पीउनका लागि बाहना मात्र चाहिन्थ्यो । कहिले पीर परेर पिइयो । कहिले झरी,वादल लागेको बाहनामा पनि खाइयो । कहिले वढी घाम चर्किएको बाहनामा खाइयो । यस्तै यस्तै बाहनाले दुव्र्यशनी बनायो ।
श्रीमतीले नर्सिङ सिद्धाइन । शिक्षण अस्पतालमा नोकरी गर्न थालिन । तर म दिन प्रतिदिन रक्स्याहा बन्दै गए । सम्झाएकी हुन,बुझाएकी हुन । तर सम्झन पर्नेले नै नसम्झिदिए पछि सम्झाएको के अर्थ रह्यो र ? एक दिन होइन दुई दिन होइन । सीम नाघेपछि उनी सानी छोरीलाई काखमा च्यापेर छोडेर हिडिन माइतीको शरणमा । रक्स्याहाको श्रीमती बनिरहन चाहिनन । विवाह गरेको ६ वर्ष पछाडि हामी अलग भयौं र सम्बन्ध विच्छेद भएको थिएन ।
श्रीमतीले मेरो श्रीमान मर्यो । उनले पनि भन्ने ठाँउ थियो । बुवा आमाको एक्ली छोरी,जस्लाई मेरो सारा संसार यही हो भनेर आएकी थिइन । उ नै गलत भए पछाडि मर्यो भन्नु ठूलो कुरा थिएन ।
श्रीमतीले छोडेर गए पछाडि मेरा लागि रक्सी झनै बाहना बन्न थाल्यो । अरुको बिहानी चियाबाट सुरु हुन्थ्यो । ठीक उल्टो मेरो बिहानी रक्सीबाट सुरु हुन्थ्यो र रक्सीबाटै अन्त्य हुनथाल्यो । झण्डै २ बर्ष वर्ष सबै काम छाडेर अल्कोहलिष्ट भए ।छोरी श्रीमती साथमै हुँदा बहिनी भाइहरुको माया पाउथे तर श्रीमतीले छाडेपछि सबै तिरबाट हेपिदै चेपिदै गए । सबै कुरा विग्रिसके पछाडि मेरो लाइफ सकियो भन्ने लाग्यो । मेरा आफ्ना इष्ट मित्र कोही छैन । आफूले आफैंलाई एक्लो महसुुस गर्नुेपर्ने अवस्था आयो ।
म रक्सीबाट बाहिर आउन चाहन्थे । पूरानै संसारमा फर्कन चाहन्थे । बाटो नदेखेर दोवाटोमा अल्मलिएको यात्री झैं थिए भौतारिरहेको । यस्तैमा एक दिन भेट भयो अमेरिका बसेर फर्किएका मामाको छोरा नविन । उनैले पु¥याए चोभारमा रहेको विष्णु शर्मा अध्यक्ष रहेको रिह्याव सेन्टरमा । झण्डै तीन वर्ष रिह्याव सेन्टरमा बसे । पुर्नजीवन पाए । र फर्किए आफ्नै टिकाथलीमा रहेको घरमा ।
तीन तल्ले घर छ । घर सबै खाली छ । पहिला घर भरिभराउ घर हुँदा पनि म मा एक प्रकारको शून्यता थियो । अहिले त घर त्यसै खाली छ मन शून्य नै छ ,मन पनि शून्य छ । यो घरभरी वरिपरि श्रीमती खोज्छु । उनको मायालाई खोज्छु । मेरो छोरी खोज्छु । सबै म बाट टाढा पुगिसकेका छन । अहिले म आफैं पनि यो घरमा भाडामा बस्ने मान्छे रक्सी नखाने खोज्छु तर कहाँ पाउनु ? साढे तीन रोपनी खेत सबै बाँझो छ । फर्किए पछि मेरा दिनहरु पुन रेडियो÷एफएमसँगै बित्न थालेको छ । म अचेल आफ्ना कार्यक्रमहरुमा अल्कोहलबाट कसरी मुक्त हुने÷छुटकारा पाउने भन्ने टिप्स बाढिरहेको छु ।
कहिलेकाही साथीहरुसँग बसिरहँदा उनीहरुलाई फोन आँउछ ‘अहो ! श्रीमतीले बोलाई खाना खान जान्छु’ भन्छन म झ्ल्यास्स हुन्छु ,अहो ! मान्छेको घरमा श्रीमती पनि हुन्छन । बिहान बेलुका दुई छाक नै भात पनि खाँदा रहेछन भन्या जस्तो लाग्छ ।
छुटेर जानु सायद अन्तिम अन्तिम समयमा मलाई मेरो श्रीमतीले भन्थि ‘बाबा हजुरको अगाडि यस्तो दिन आँउछ कि मैले गल्ती गरे सरी नानु ! भनेर भन्न मन त लाग्छ तर त्यो भन्ने दिन पनि पाउनुहुन्न ।’ आज म उनको अगाडि बसेर दिल खोलेर रुन चाहन्छु । म सुध्रिएर आएको छु । म पहिलाको मान्छे होइन भन्न चाहिरहेको छु । तर उनीबाट दुर । विदेशी भूमीमा । म उनको मायामा यसरी रुमल्लिएको छु कि यो बीचमा धेरैका प्रस्ताव आए विवाहका तर मलाई डर छ,कल्पनाले गर्ने जतिको माया अरुबाट पाउन सक्दिन भन्ने मलाई थाहा छ । त्यही कारण म दोश्रो विवाह गर्ने सोचमा छैन ।
छोरी सेलिना १६ वर्षकी भइन । अहिले जापानमा अध्ययन गर्दै छिन । अहिले आएर पीडा हुन्छ । सँगै बस्न पाए हुन्थ्यो भनेको जस्तो लाग्छ तर मान्छेको मन मरिसकेपछि फेरि किन पलाँउथ्यो र ? उस्को माया साच्चै म प्रति मरिसकेको छ । तर मेरो माया उनीप्रति झन झन गाढा हुँदैछ । सामाजिक सञ्जालमा खोज्छु । उनका तस्वीरहरु हेर्छु त्यतिकै टोलाउछु ।उनका वुवा/आमालाई भेट्छु । भाइहरुलाई सोध्छु उनको खबर । उाी म बाट जति टाढा भए पनि मेरो माया झन झन गाढा हुँदैछ । सायद उनले छोडेर नगएको भए म सुध्रिने पनि थिइन कि ? म उनीसँग पुन आफ्नो घरबार बसाउन चाहन्छु । आफ्नो माया खनाउन चाहन्छु । म सुध्रिएको/बदलिएको खबर सुनाउन चाहन्छु । तर उनी उता छिन विदेशी भूमीमा, म यता तडपदैछु छोरी र उनको मायामा ।
अल्कोहल,जस्ले कसरी लग्यो एउटा प्रतिभालाई । कसरी लगिरहेछ खेमदाई जस्तै अन्य प्रतिभाहरुलाई अल्पायूमै । अल्कोहल जस्ले कसरी उजाड बनाइरहेछ म जस्ता अल्लारेहरुको घर परिवार ? आज आफ्नै प्रेम र मुटुसँग अलग्गिएर म कसरी शून्यमा बाच्न अभिसप्त छु ।
जड्याहा बाबुलाई पित्री दिवसको सन्देश ।
Heart touching real life incident from my own place tikathali,I want meet you brother.
Navin raj joshi says:
Great…….don’t count…..what you don’t have!! count your soberiety and other alcoholics who is still suffering….and those who is starting for hell…you only you can help them.
भोज खाँदै रन्जित रे कड्किए ‘विजुली दिने हामी,जस खाने कुलमान ?’